कोरोनाभाइरस र तपाइँका घरपालुवा जनावरहरूका बारे सरोकार: कसरी सतर्क रहन - राम्रो एयर टोली द्वारा K9 मास्क
घर > वायु प्रदूषण कुकुर ब्लग > कोरोनाभाइरस र तपाईंको घरपालुवा जनावर बारे सरोकार: कसरी सतर्क रहनुहोस्
कोरोनाभाइरस र तपाईंको घरपालुवा जनावर बारे सरोकार: कसरी सतर्क रहनुहोस्
A COVID-19 को साथ एक महिला सम्बन्धित पालतू कुकुर समाचार रिपोर्टका अनुसार, यसको मालिकबाट "निम्न-स्तरको संक्रमण" संकुचन गरिएको छ।
जब ह Hongक Kongका एक पोमेरानियनले गत हप्ता सार्स-कोभ -२ का सकारात्मक परीक्षण गरे, घरपालुवा जनावरहरू छिटो नै कोरोनाभाइरस कुराकानीको हिस्सा भए। मुद्दाले चिन्ताजनक सम्भावना खडा गर्‍यो कि घरपालुवा जनावरहरू गम्भीर तीव्र श्वसन सिन्ड्रोम कोरोनाभाइरस २ को प्रसारण श्रृंखलाको हिस्सा बन्न सक्छन् जसले सम्भवतः उनीहरू र हामी दुवैलाई हानी गर्दछ। तर धेरै प्रश्नहरू यस सम्भावनाको बारेमा छन् र कसरी जवाफ दिने उत्तम।
फोटो द्वारा एलेक्स निरता बाट फुट्छ
२००s को प्रकोपको बेला कुकुर र बिरालाहरूले गम्भीर तीव्र श्वसन सिन्ड्रोम (सार्स) को निम्न स्तरको संक्रमणको संकुचन पनि गरेको थियो, सिटी विश्वविद्यालयका पशु स्वास्थ्य विशेषज्ञ वनेसा बारसले दक्षिण चाइना मोर्निंग पोस्टलाई भने।
ह Hongक Kongको कृषि, मत्स्यपालन र संरक्षण विभाग (एएफसीडी) पछिल्लो हप्ता एक तथ्य पाना मा वर्णन गरे, पोमेरानियनले भाइरसको लागि “कमजोर सकारात्मक” परीक्षण गर्यो संवेदनशील परीक्षणहरूमा कि नाक र मुख नमूनाहरूमा भाइरल आरएनए पत्ता लगायो। “कुकुरलाई संक्रमणको तल्लो स्तरको स्तर छ र यो मानव-जनावरबाट जनावरको प्रसारणको मामला हुन सक्छ,” एएफसीडीले लेखे। "हामी कडा सल्लाह दिन्छौं कि स्तनपायी पाल्तु जनावरहरूलाई कुकुर र बिरालाहरू सहितको परिवारबाट आएका… संक्रमित व्यक्तिहरूलाई अलग्गै राख्नु पर्छ ... सार्वजनिक र पशुहरूको सुरक्षाको लागि।"
शेली रान्किन, पेन्सिलभेनिया युनिभर्सिटी अफ वेटरनरी मेडिसिनको माइक्रोबायोलोजिष्टफिलाडेल्फियालाई भर्खरै घरपालुवा जनावरहरूमा COVID-19 संक्रमणको जोखिमको बारेमा साक्षात्कार गरिएको थियो। उनको प्रयोगशाला अमेरिकी खाद्य तथा औषधि प्रशासनको वेटरनरी प्रयोगशाला अनुसन्धान र प्रतिक्रिया नेटवर्कको एक हिस्सा हो, पशु चिकित्सा निदान प्रयोगशालाहरूको एउटा समूह जसले घरपालुवा जनावर र अन्य जनावरहरूमा महामारीको प्रभाव निर्धारण गर्न मद्दत गर्दछ।
प्रश्न: के हामी नयाँ पाल्तु जनावरहरुलाई घरपालुवा जनावरमा पठाउन सक्छौं?
A: SARS-CoV-2 भाइरस मानिसबाट मानिसमा सर्छ। यस समयमा कुनै जनावरलाई जनावरलाई सहयोग गर्न कुनै अनुसन्धान छैन। ह theक Kong कुकुरको नमूनाहरु मा थोरै संख्यामा भाइरस कण रहेको थियो। रोगको कुनै क्लिनिकल संकेत नभएको जनावरमा, यसको अर्थ के हो भनेर भन्न गाह्रो छ। यो एकल केस थियो, र हामीले सिक्यौं कि हामीले मानव SARS-CoV-19 भाइरसलाई संक्रमित गर्न सक्ने सम्भाव्यताको बारेमा धेरै अनुसन्धान गर्न आवश्यक छ।
भन्यो, बिराला र कुकुर पनि स्तनपायी नै छन्। तिनीहरूसँग हामीले प्रयोग गर्ने सेलहरूमा रिसेप्टर्सका धेरै समान प्रकारहरू छन्। त्यसैले भाइरस सैद्धान्तिक रूपमा यी रिसेप्टर्समा संलग्न गर्न सक्दछ। तर के यसले तिनीहरूका कोषहरू प्रविष्ट गर्दछ र प्रतिलिपि गर्दछ? सायद होईन।
अझै, SARS-CoV-19 संक्रमित व्यक्तिहरूले तिनीहरूको घरपालुवा जनावरहरूसँग सम्पर्क सीमित गर्नुपर्दछ। आफ्नो हात धुनुहोस्, र तिनीहरूलाई अनुहारमा तपाईंलाई चाटाउन नदेऊ। यदि भाइरस तपाईको स्रावमा छ, र त्यहाँ प्रसारण को कुनै सम्भावना छ, यी तरीका बाट यो प्रसारित हुन सक्छ।
Q: के हामीले COVID-19 को पुष्टि भएका मामलाहरूमा व्यक्तिहरूको घरपालुवा जनावर जाँच्दैछौं?
A: त्यो होईन [सबैजनाको शीर्ष प्राथमिकता अहिले। यदि हामीले ह Hongक Kong पोमेरानियन जस्ता धेरै केसहरू देख्न थाल्यौं भने यो छलफल हुनु पर्छ।
प्रश्न: के घरपालुवा जनावरहरूले भाइरसको भण्डारको रूपमा सेवा दिन सक्छ र यसलाई हामीलाई फिर्ता पठाउन सक्छ?
A: यदि घरपालुवा जनावरहरू संक्रमित हुन सक्छ - र हामी जान्दैनौं कि तिनीहरू जान्छन् भने - तब हो, तिनीहरूले जलाशयको रूपमा काम गर्न सक्दछन्। र त्यो अवस्थामा हामीले उनीहरूसँग त्यसरी व्यवहार गर्नु पर्छ जस्तो हामीले मानव केसहरूसँग व्यवहार गरिरहेका छौं। हामीले उनीहरूसँग कसरी व्यवहार गर्ने भनेर हामीले सोच्नु पर्छ। मानव अस्पताल जस्तै, पशु चिकित्सक अस्पतालहरु को संख्या को संख्या मा एक वृद्धि को लागी तयार गर्नु पर्छ।
Q: हामी पनि हाम्रो घरपालुवा जनावर संगरोध?
A: हो, मानव जस्तो, केहि अस्पतालमा क्वारेन्टिन हुन सक्छ। वा आश्रय। वा कुकुर दिन हेरचाह पनि। यदि उनीहरूसँग भाइरस छ तर बिरामी थिएन भने, तपाईं तिनीहरूलाई घरमा अलग्गै राख्न सक्नुहुन्छ। तपाईं उनीहरूसँग आफ्नो सम्पर्क सीमित गर्न चाहानुहुन्छ। सायद उनीहरुलाई सुत्ने कोठामा अरु मानिसहरु र जनावरहरु बाट टाढा राख्नुहोस्। तपाईं आफ्ना हातहरू बारम्बार धोउन चाहानुहुन्छ, र कोठामा प्रवेश गर्दा सायद मास्क लगाउनुहुन्छ।
प्रश्न: यदि तपाईं एकै घरमा मानिसहरू हुनुहुन्छ, केही अलग गरिएको छ भने, केहि हैन, - घरपालुवा जनावर दुबै भेट्न सक्छन्?
उत्तर: होईन, प्रशस्त सतर्कताबाट, उत्तर होईन।
प्रश्न: हामीले हाम्रो घरपालुवा जनावरहरूलाई बचाउन अहिल्यै के गर्नुपर्छ?
उत्तर: तपाईंको परिवारको तयारी योजनामा ​​घरपालुवा जनावरहरू समावेश गर्नु महत्त्वपूर्ण छ। यदि तपाईं बिरामी हुनुहुन्छ र क्वारन्टेनाइज्ड हुनुहुन्छ भने, तपाईंले हातमा अतिरिक्त पाल्तु जनावरहरूको खाना छ भनेर निश्चित गर्नुपर्छ। र तपाईंले आफ्ना छिमेकीहरूलाई कुनै खाना, हिड्न, वा तपाईंको घरपालुवा जनावरलाई आवश्यक पर्ने औषधिहरूको बारेमा सचेत गराउनु पर्छ यदि तपाईंलाई घर फिर्ता बनाउन सक्नुहुन्न। अब तयार हुनुहोस्। म मेरो बिरालोसँग एक्लै बस्छु। मसँग अतिरिक्त खाना छ। चाहे उसलाई [चाँडै] यो आवश्यक छैन भने, उसले अन्ततः यसलाई खाने छ।